Erdogan: Mustaqbalka Turkigu Wuxuu Yaalaa Yurub – Heemaal News Network
Erdogan: Mustaqbalka Turkigu Wuxuu Yaalaa Yurub
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu gacan u fidiyay Midowga Yurub. Isla mar ahaantaana, wuxuu uga digayaa midowga in lagu fara-geliyo xiisadaha sii kordhaya ee bariga Mediterranean.
Sahaminta Turkiga ee gaaska ku jira biyaha lagu moransan yahay, ayay Turkigu kala kulmeen cambaareyn uga timid Midowga Yurub.
“Waxaan fileynaa in Midowga Yurub ay fulin doonaan balanqaadyadooda, oo aan nala takoorin ama ugu yaraan aysan xudun u noqon doonin cadaawada furan ee lagu wajahayo dalkeena,” ayuu yiri Erdogan oo khudbad muuqaal ah ka jeedinayay shirkii qaran ee xisbiga talada haya ee Turkiga Sabtidii.
Turkiga wuxuu ku jiray waqtigiisii ​​wadaxaajoodka xubinnimada ee Midowga Yurub, laakiin howsha ayaa joogsatay intii uu hogaaminayay Erdogan waxayna sidoo kale uu la kulamay diidmo dhowr dal oo xubin ka ah midawga Yurub.
– Iskuma aragno meel kale oo aan ahayn Yurubta. Waxaan ku talo jirnaa inaan mustaqbal wada dhisno Yurub, ayuu yidhi Erdogan
Hogaamiyaasha Midowga Yurub ayaa lafilayaa inay go’aan ka gaaraan bisha December hadii cunaqabateyn cusub la saari doono Turkiga iyo in kale.
Markabka cilmi baarista Turkiga ee Oruc Reis ayaa maanta udub dhexaad u ah xiriirka xumaaday ee Turkiga iyo Brussels. Sabtidii, mas’uuliyiinta Turkiga waxay kordhiyeen safarka baaritaanka oo ay ka dhigeen illaa iyo 29-ka Nofeembar, in kasta oo mudaaharaadyo ay ka socdaan Griiga.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Athens waxay cambaareyneysaa falkaa.
“Falalkan, oo xudun ahaan ka horjoogsanaya rajo kasta oo lagu hagaajinayo xiriirka ka dhexeeya Midowga Yurub iyo Turkiga, halka mas’uuliyiinta Turkigu ay sheegeen in ku biiritaanka dalka ee Midowga Yurub ay tahay” mudnaanta istiraatiijiyadeed “, ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay.
Isla khudbaddaas ayuu Erdogan ku sheegay in Turkigu doonayo inuu “si firfircoon u adeegsado xulufadiisa soo jireenka ah iyo xiriirka dhow ee uu la leeyahay Mareykanka si uu u xalliyo dhibaatooyinka gobolka iyo caalamka.”
Erdogan ayaan ka mid ahayn madaxdii ugu horreysay ee ugu hambalyeeyay madaxweynaha imanaya Joe Biden guushiisa. In kasta oo uu xidhiidh dhow la lahaa Donald Trump, haddana waxa jiray xoogaa khilaaf ah oo u dhexeeyay labada dal.
Iibsashada Turkiga ee nidaamka difaaca gantaalaha casriga ee Ruushka ayay ka carootay Washington. Ankara ayaa si weyn u dhibsatay Mareykanka oo diiday inuu dhiibo daaci wacdiya oo Erdogan ku eedeeyay inuu danbeeyey afgembigii dhicisoobay ee 2016.